Meydka Raysul Wasaarihii Ee Soomaaliya Oo Maanta Lga Qaadayo Dalka Mareykanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Minneapolis – Mareeg.com: Maydka ra’iisul wasaarihii labaad ee Soomaaliya, Cabdirisaaq Xaaji Xuseen oo dhawaan ku geeriyooday Mareykanka ayaa lagu wadaa in manta oo arbaco ah laga qaado dalka Mareykanka, islamarkaana loa geeyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Maydka marxuum C/risaaq Xaaji Xuseen ayaa maanta oo Arbaco ah 11 subaxnimo laga dhoofinayaa garoonka Miineapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, waxaana xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya kula wareegi doonaan dalka Turkiga.
Meydka marxuumka ayaa waxaa raaci doona magaalada Minneapolis wafdi ka kooban jaaliyadda Soomaaliyeed iyo qoyskiisa, waxaana ka mid ah Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar.
Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa saaladda lagula tukaday salaadda janaasada masaajidka weyn ee Abuubakar Al-Sadiiq ee magaalada Minneapolis shalay oo Talaado ahayd, iyadoo ay jinaasada ka qeybgaleen muslimiin fara badan.
Marxuum C/risaaq Xaaji Xuseen ayaa lagu wada in maalinta Jimcaha ee soo socota oo ay bishan ku beegan tahay 07-da lagu aaso magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliya ay guddi qaran oo ka kooban labada gole u saartay aaskiisa.